Halbeegga Farsamada Shiinaha ee mashiinka xiirashada Kumbiyuutarka ee 6x3200MM oo leh E21 Soo-saar iyo Warshad | BiGa
Halbeegga farsamada ee mashiinka xiirashada Hydraulic 6x3200MM oo leh E21
Qaab dhismeedka alxanka birta ah ayaa la qaatay, oo leh gudbinta hawo-qaadista iyo soo-celinta isku-darka, sida caadiga ah ee hawl-fudud, wax-qabad lagu kalsoonaan karo, iyo muuqaal fiican, oo lagu rakibay nidaamka muujinta dhijitaalka ah. Tilmaamid tilmaame ayaa loo bixiyaa si loogu hagaajiyo foornada baalasha si loogu hagaajiyo isla markaana waxtar leh oo dhakhso leh
• Qaabdhismeedka alxanka oo dhan, xanaaqa
• Qaab dhismeedka alxanka birta ah ayaa la qaatay, oo leh gudbinta hawo-qaadista iyo soo-celinta isku-darka, sida caadiga ah ee hawl-fudud, wax-qabad lagu kalsoonaan karo, iyo muuqaal fiican, oo lagu rakibay nidaamka muujinta dhijitaalka ah.
• Tilmaamid tilmaame ayaa loo bixiyaa si loogu hagaajiyo foornada baalasha si loogu hagaajiyo isla markaana waxtar leh oo dhakhso leh
• Qalabka isku dhejinta ee leh nalalka iyo aaladda xakamaynta istaroogga ayaa ah mid hagaagsan, oo leh hagaajin habeysan oo rooti ah.
• Qalabka wax lagu rogo ayaa la siiyaa, si loo yareeyo dabada kalluunka ee leh xaashida iyo in la yareeyo iska caabinta khilaafaadka.
• Nidaamka Haydarooliga wuxuu ka yimaadaa Bosch -Rexroth, Germany.
• Qaado nidaamka kontoroolka isku dhafan ee isku dhafan, oo lagu kalsoonaan karo oo sahlan dayactirka.
• Gudbinta Haydarooliga oo leh kalsooni sarreysa, nidaam isku-dhafan oo isku-dhafan ayaa si wax ku ool ah u yareyn kara dhibaatooyinka ay keenaan daadashada dareeraha hidda.
• Difaaca xad dhaafka ah ee loo yaqaan 'overflow overflow' ayaa loo habeeyay nidaamka haydarka, kaas oo hubin kara baxsi la'aan, heerka saliidda waa la akhrin karaa ama si toos ah ayaa loo arki karaa.
Nidaamka Haydarooliga waxaa loo sameeyaa si waafaqsan r.
• Waqtiga gudbinta gudaha iyo miiska keydka
Hore: Halbeegga farsamada ee bareega saxaafadda Haydarooliga oo leh E21 125T / 2500 mm
Xiga: Tayada Taiwan qiimaha Shiinaha MV855 Mashiinka Xarunta
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha Sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Hal-Dhamaystiran, Nooca Gawaarida Mashiinka Mashiinka, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Cagaaran, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Dhufto Double-End,